Tirinta codadka doorashooyinka soomaaliland oo weli socota | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Tirinta codadka doorashooyinka soomaaliland oo weli socota
Tirinta codadka doorashooyinka soomaaliland oo weli socota
Guddiga doorashada Somaliland ayaa weli ku howlan tirinta codadka doorashooyinka golayaasha Wakiilada iyo deegaanka Somaliland oo shalay ka bilowday deegaanadaas, lana soo gaba-gabeeyay.
Guddiga doorashada ayaa lagu wadaa in ay saacadaha soo socda soo gaba-gabeeyaan tirinta codadka doorashada ee Gobollada qaar, iyaga oo ku dhawaaqi doona natiijooyinka kama dambeysta ah.
Doorashada Somaliland ayaa waxaa ku baxaya Qarash dhan ah 25 malyan oo dollar, waxaana Somaliland ay bixineysaa boqolkiiba 80, halka Midowga Yurub iyo Taiwan ay bixin doonaan 20 boqolkiiba.
Ilaa iyo hadda ma jirto saadaal rasmi ah oo ku aaddan xisbiga la filaayo inuu ku guuleysto aqlibiyadda kuraastii loo tartamay, waxaana dadka Coddeeyay kamid ah Guddoomiyeyaasha Xisbiyada ku tartamaya doorashada Somaliland ee Wadani, UCID iyo kulmiye oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Maqaal horeDagaal u dhexeeya Ciidanka Dowladda iyo Al-shabaab oo ka socda degaano
Maqaal XigaMeydka Gabar la la’aa maalmo oo Maanta laga helay Guri ku yaal Muqdisho